Daawo: Faarax Macalim oo si yaab leh uga hadlay Waxa ku dhacay Cabdi Iley iyo Isbadalka geeska Afrika (Muuqaal) | KALSHAALE
Daawo: Faarax Macalim oo si yaab leh uga hadlay Waxa ku dhacay Cabdi Iley iyo Isbadalka geeska Afrika (Muuqaal)
Aug 8, 2018 - 7 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Siyaasiga Faarax Macalim ayaa si wayn uga hadlay Isbadalka ka dhacay Dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Rabshadihii halkaasi ka dhacay.
Wuxuu sheegay inuu Cabdi Maxamuud Cumar deegaanka ku dilay Dad aad u Tiro badan, Wuxuuna sheegay in Ciidamada Dawladda Itoobiya ay Dalbadeen waxgaradka deegaanka, Wuxuuna sheegay inuu soo dhowaynayo Sida loola dhaqmay Cabdi Maxamuud Cumar.
Ugu dambayntii wuxuu ka hadlay Faarax Macalin Isbadalka ka dhacay Geeska Afrika ee Hormuudka uu ka yahay Raysal wasaaraha Itoobiya, Wuxuuna sheegay inuu isagu dantiisa ku ilaashanayo in heshiis uu la galo Soomaalida iyo Eleteriya, Si aan Xukunka looga Tuurin.
Hhh war go’iwaaye, ma cabdi illey baa xumaa ayey kaa taagantahay weli? oo siyaasadan sii cuslaanaysaba waxba kaagama bixin miyaa?
war waan ku arkaa, siyaasadiiba waad ka dhacsantahaye, bal aan kuu ducaynee,nacnacdaada iyo niikadaada un na dhaafi ninyahow hhhh
Midda kale, bal inaad nooc kale tahay,soomaalida caafimaadka qabta ee aad rabto inaad iska gaddo halkay joogtaa maanta waa yaabe? war soo tan habar walba ayadoo xanuunsan ey gurigeeda dhex taala ma’aha hhh
yaab,bukaan jiifki baa yaabay
FAARAX MUCALLIN waa lagu yaqaan…..
Please ku shubbo lacag…… telephoonka lacaga ku shaqeeyaa, iga dheh.
FAILED POLITICIAN, meelahaas ha ka qayliyo sidee Tukki haraaday.
weedhsame, magacaaga & tani ma isleeyihiin?; “nacnacdaada iyo niikadaada un na dhaafi ninyahow hhhh”.
*Adeer, maxaa noo diiday inaan ràyigeenna dhiibano annagoo ereyo HUFAN adeegsanayna. WBT
weedhsame adeer, ràyigaaga waan la dhacsanahay ee waxaan leeyahay turaanturada ka ilaali. WBT
weedhsame adeer, haddaad wax yar is QANJURUFATO anaa eedda iska leh ee fadlan raalli ahaw. WBT
War yaa ka warqaba Jugle, ma noolyahay mise dhanki kaluu ku biiray. WBT
Oo nooc jimicsiga kamid ah iney tahay umbaan moodayee, nii………. waa dambi miyaa? hhhh astaqfirullah
War ninyahow, ninkan meesha uu kahadlaayo iyo meesha xaal maraayo ayaa iskukey qaban waayay xaqiiqatan.
Haa, cafis baan weydisan doona inshaa Allah